Michelle Obama ले अन्तिम मा आएर आफ्नो छोरिले गाजा खाएको बारेमा लाई केहि बोल्न कार् लग्यो. – OnlineDealsUSA
Michelle Obama ले अन्तिम मा आएर आफ्नो छोरिले गाजा खाएको बारेमा लाई केहि बोल्न कार् लग्यो.
August 16, 2016 November 19, 2016 gyangun
एकाएक मिडियामा अमेरिकाको रास्ट्रपति बरक ओबामाको छोरिले फस्ट फूड रेस्टुराँ मा काम गरेर चर्चा कमाएकी आर्को हप्ता गाजा खाएको भिडियो ले आलोचित भएकी Malia Obama को बारेमा अहिले उसकी आमा Michelle Obama ले केहि बोलेकी छन् .
जब उसको गाजा खाएको विदेओ सार्बजनिक भयो, फेरी मेडियामा नाना थरि कुरा हरु चल्न थाले. ओबामा परिवारले धेरै आलोचना खेप्न पर्यो. भर्खर १८ मा लागेकी Malia Obama ले डेमोक्रेटिक नेसनल कनभेनसन छाडेर गाजा खान Lollapalooza पुगेकी थिन.
आखिर मा अमेरिका को फस्ट लेडी Michelle Obama लाई केहि बोल्न कार् लग्यो.
यो पढेर लाग्छ कि आफ्नो छोरि को सुप्पोर्ट गरेको जस्तो. तर उनले खुलाएकी चाही छैनन्
ओलम्पिकमा भाग लिएका सबै अमेरिकन खेलाडीलाई राष्ट्रपति बरक ओबामा र फस्ट लेडी Michelle ओबामा यो सन्देश
आखिर हामी छोरीको घर कुन हो ?? – लक्ष्मी पहारी